Uluhlu lweearhente zeeNdawo Ukuthengisa kunye nokuhlawulwa ngaphakathi London
1 - 10 ka 155638 Uluhlu
Ipapashwe ngu Padpla Ltd
Ipapashwe ngu Next Property
Ipapashwe ngu Love London Property
Ipapashwe ngu Doorsteps.co.uk, National
Ipapashwe ngu Douglas Allen
Ipapashwe ngu Savills - Maida Vale Little Venice Lettings
Ipapashwe ngu London Wide Lettings
ILondon yeyona dolophu inkulu kunye ne-England enkulu kunye ne-United Kingdom. Ukuma phezu koMlambo iThames kumazantsi mpuma eNgilane, kumantla olwandle oluziikhilomitha ezingama-80 oluya kuLwandle olukuMantla, iLondon ibe sisimo esikhulu sokuhlala kangangezigidi ezibini zeminyaka. ILondinium yasekwa ngamaRoma. IsiXeko saseLondon, isiseko samandulo saseLondon - indawo eyi-1.12 yeekhilomitha (2,9 km2) kwaye yaziwa njenge-Square Mile - igcina imida elandela ngokusondeleyo umda wayo wexesha eliphakathi. IsiXeko saseWestminster sikwindawo engaphakathi yeLondon ebambe imeko yesixeko. IGreater London ilawulwa nguSodolophu waseLondon kunye neLondon Assembly.ILondon ithathwa njengenye yezona zixeko zibalulekileyo zehlabathi kwaye ibizwa ngokuba yeyona inamandla, inqweneleka kakhulu, inempembelelo kakhulu, yandwendwelwa kakhulu, ibiza kakhulu, iyilahleko, uzinzo, uninzi lotyalo-mali luluhlobo, kunye nokuthandwa kakhulu-ngumzi womzi. ILondon inefuthe elibonakalayo kubugcisa, kwezorhwebo, kwezemfundo, kwezolonwabo, kwifashoni, kwezemali, kwezempilo, eendaba, iinkonzo zobungcali, uphando nophuhliso, ukhenketho kunye nokuhamba. ILondon ikwinqanaba lama-26 kwezingama-300 kwizixeko ezikhulu ezisebenzayo kuqoqosho. Lelinye lawona maziko makhulu ezemali kwaye inendawo yesihlanu okanye yesithandathu yeedolophu ezinkulu zedolophu. Yeyona dolophu ityelelweyo kakhulu njengoko ilinganiselwa abafikayo bamazwe aphesheya kwaye inesona sixeko seenqwelomoya esixekweni njengoko kulinganiswa ngabantu abahamba ngendlela. Sisiphelo esikhokelela kutyalo-mali, ukusingatha abathengisi bamazwe aphesheya kunye nabona bantu baxabisa kakhulu kunasiphi na esinye isixeko. Iiyunivesithi zaseLondon zenza ezona zakhiwo zikhulu zamaziko emfundo ephakamileyo eYurophu, kwaye iLondon likhaya kumaziko abekwa kwinqanaba eliphakamileyo njenge-Imperial College London kwizifundo zendalo kunye nezesayensi, iLondon School of Economics kwizifundo zentlalo, kunye neDyunivesithi yaseLondon kunye neKholeji yaseKing. London. Ngo-2012, i-London yaba sisixeko sokuqala ukubamba iMidlalo yeOlimpiki yeHlobo ezintathu.London inabantu abahlukeneyo neenkcubeko, kwaye zingaphezulu kwe-300 iilwimi ezithethwa kulo mmandla. Uqikelelo lwayo loomasipala abaphakathi konyaka ka-2018 (ehambelana neGreater London) yayingama-8,908,81, elesithathu elona lizwe lininzi nakweyiphi na idolophu yaseYurophu kwaye li-13.4% labemi base-UK. Indawo yedolophu yaseLondon yeyesithathu kwabona baninzi eYurophu, emva kweMoscow kunye neParis, enabemi abangama-7 737,426 kubalo bantu luka-2011. Ibhanti yabahambi yaseLondon yeyona ndawo inabantu abaninzi eYurophu enabemi abayi-14,040,163 ngo-2016. Ngaphambi kweBrexit, iLondon yayisesona sixeko sikhulu e-EU. ILondon inezindawo ezine zeLifa leMveli yeHlabathi: iNqaba yaseLondon; Izitiya zeKew; indawo ebandakanya iBhotwe laseWestminster, iWestminster Abbey, kunye neCawa yaseSt Margaret; kunye nokuhlaliswa kwembali eGreenwich apho iRoyal Observatory, iGreenwich ichaza iNkulumbuso eyiMeridi (0 ° ubude bayo) kunye neGreenwich intsingiselo yexesha. Eminye imihlaba ebandakanyekileyo ibandakanya iBuckingham Palace, iLondon eyeLondon, iPiscadilly Circus, iSt Paul Cathedral, iTower Bridge, iTrefalgar Square kunye neShard. ILondon ineemyuziyam ezininzi, igalari, amathala eencwadi kunye nemidlalo. Oku kubandakanya iMyuziyam yaseBritane, igalari yeSizwe, iMyuziyam yezeNdalo, iTate yanamhlanje, iThala leeNcwadi laseBritane kunye neethiyetha zaseNtshona. ILondon Ngaphantsi yeyona ndlela kaloliwe yakudala iphantsi komhlaba.